Lapho isidumbu sowesifazane okuzelwe impilo entsha, umzimba iza "ukulwa" ukulungela. Zonke amabutho aqondiswe kumiswa lesifanele nokuthuthukiswa umbungu. Phakathi nale nkathi, idinga isamba esengeziwe sika-izakhamzimba. Futhi ngokuvamile, abakhulelwe idla izindodla izithelo nemifino. Phakathi kwabo kanye ubhamubhamu. Kodwa liye ngokuphindaphindiwe kwaphakamisa umbuzo noma ngabe ubhamubhamu ukhulelwe? Kuyinto ezisawolintshi, futhi yaziwa, kungabangela komzimba.
Grapefruit kanye nenzuzo yayo
"Izithelo Kuso", uye wathola emhlabeni wonke unabe ekuseni njengoba 1880, ngokushesha uwina uthando lwabantu, okungenani kanye ukuyizama. ukunambitheka layo elimnandi eziningi izakhiwo ewusizo lesi sithelo is zibe seMtatsheni yesigaba Vitamin amabhomu.
Indaphundaphu ubhamubhamu uqukethe amavithamini namaminerali. umphumela ekwelapheni hhayi kuphela uginindela kodwa futhi ikhasi, imbewu kanye plenochki. Ukudla izithelo nsuku zonke kuze kuphele isigamu umuntu recharges umzimba wakho anempilo namandla. Phela, kuyinto antidepressant zemvelo.
ngamavithamini A, E;
Grapefruit nokukhulelwa ekuseni
abelaphi Iningi ukuxwayisa ukuthi abesifazane abakhulelwe abanemizimba ezwelayo, kuba engathandeki ukudla "phesheya" izithelo nemifino. Kukholakala ukuthi ekudleni elilungile ngoba yizo kanye lezi imifino nezithelo ezimila esimweni sezulu zone efanayo, lapho kuhlala khona owesifazane ophila.
Kodwa kuhle ukuthi uzinake wena ukuthi umbuzo othi "Ingabe abesifazane abakhulelwe ekuseni sokukhulelwa kwangangopapamusi?" Kungenziwa waphendula ngokuqiniseka: "Yebo"
Kakhulu ezifunwayo kusaqalwa emzimbeni kamama esizayo kukhona i-folic acid, i-magnesium, vitamin C odingekayo ngosuku Konke lokhu enyameni isithelo ugcwele. Isimo kuphela ukusetshenziswa reception alinganisiwe.
Ukuze impilo enhle futhi akhule kahle umntwana ngokwanele ukudla isigamu kwangangopapamusi ngosuku. Ngakho, umzimba uzothola ngokwanele i-folic acid sokuthuthukiswa evamile kohlelo fetus sezinzwa, namasosha omzimba futhi ukwandisa-hemoglobin umama, futhi pantothenic acid, normalizing pheshana emathunjini. Kunonophisa umzimba, pantothenic acid kususa umuzwa isicanucanu lapho toxicosis.
Ngingaba Grapefruit emabangeni kamuva?
Abaningi bangase bazibuze lesi sithelo kuyasiza kangaka, kungani akukashicilelwa njengoba ikhambi lazo zonke izifo?
Izimfanelo ngokuyisimangaliso ubhamubhamu, kanye izithelo ngokwalo, babé esikhona sakamuva. Kodwa sibonga isazi angaphandle, Allergists, ukuzisebenzisela Oqondisa amandla iziguli, izakhamuzi amazwe CIS elingangena ngokuphepha akudle.
Lekoptin futhi pantothenic acid, okuyizinto kwaba nezithelo eziningi ezinhle - Antioxidants ezinamandla, okuyinto abe izakhiwo eqinile anti-iguliswa, elenza kukwazeke ukuyengeza ukudla, ngisho labo ukungabekezelelani eziphikelelayo zezithelo ezisawolintshi.
Grapefruit muhle kakhulu ukuthi abantu abaphethwe umfutho wegazi ophezulu kanye ngokweqile. Ukwehlisa inani cholesterol egazini futhi kususa uketshezi ngokweqile, izithelo kumane esisemqoka ezigabeni kamuva yokukhulelwa.
Nginga ubhamubhamu abakhulelwe 3 senyanga? Nakanjani yebo. Ngenxa impahla yayo, omama abakhulelwe kungukuthi ezisengozini isifo ukuntuleka kwamavithamini, ukungezwani preeclampsia, umfutho wegazi ophakeme, ukukhuluphala nezinkinga wamathumbu.
Izinkinga pheshana emathunjini - omunye okuvame kakhulu ezigabeni kamuva. Ukuxazulula kubo, kwanele ukwengeza Indaphundaphu izithelo salads noma baphuze isiphuzo sezithelo. Inyama yomhlatshelo ubhamubhamu kuyinto okune-fibre, okuyinto ngesivinini umsebenzi emathunjini.
izinto eziwusizo kufakwe Ukwakheka, hhayi kuphela ukukhuthaza lipolysis kanye ukumuncwa ngokushesha kodwa futhi ngesivinini zonke izinqubo umzimba emzimbeni.
Imithi engamakhambi inikeza omama abakhulelwe ukuba badle nocezu ubhamubhamu ngaphambi kokulala. Magnesium B amavithamini esivivaneni ukuze kuthuthuke ukuzinza isimiso sezinzwa, ngcono ukulala.
Nginga ubhamubhamu ukhulelwe? Izinzuzo owesifazane kanye nengane licacile:
ngcono ukusebenza izivikeli mzimba;
ekuthuthukiseni umsebenzi emathunjini;
kwehlisa cholesterol, ushukela egazini;
Aphinde asheshise umzimba.
Grapefruit kanye contraindications
Nginga ubhamubhamu abakhulelwe uma hyperacidity?
Enye yezinkinga ezibhekene omama esizayo - kuyinto isilungulela. Kuyinto ezinzima ikakhulukazi ezinyangeni okugcina enkathi yokukhulelwa. Ngakho ungahlukumezi inani elikhulu "isithelo esenqatshelwe '.
esiningi Vitamin C kungabangela nokucekelwa ukuhlupheka kolwelwesi, isilonda sakho.
Nginga ubhamubhamu ukhulelwe, uma zikhona izinkinga ne nezinso isibindi?
umzimba, olubhekene nezifundiswa ezingasebenzi kudinga ukwanda isibindi. Abantu ne isifo sesibindi, le nqubo kungabangela ukwanda estrogen. Kuyaziwa ukuthi le hormone obangela ukukhula izimila abulalayo ezaziwayo.
Kungenzeka yini ukuba umuntu adle kwangangopapamusi kwabesifazane abakhulelwe, uma batsatsa neminye imithi?
Ososayensi bathole ukuthi nokuxhumana ubhamubhamu nezidakamizwa ezithile, umsebenzi wabo incipha. Okwamanje, 84 izidakamizwa ukubuzisisa uxhumana ubhamubhamu.
Indlela ukuze adle ubhamubhamu
Nginga abakhulelwe kwangangopapamusi? Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka ahlale isihlobo. Uma nidla lesi isithelo izinto eziningi ezincane, kungaba kuphela ukuzuza. Into esemqoka - kulungile ukuzivumelanisa:
in salads nge imifino kanye nenyama;
Ukuze ujabulele ukunambitheka "izithelo emvinini", kufanele usule tincetu plenochek ezimhlophe, onikeza i ukunambitheka ababayo edabukisayo.
Ukukhulelwa noBhati - niyafanelana yini noma cha?
Amaphilisi Calcium kwabesifazane abakhulelwe: yini okufanele uwukhethe nokuthi ukwenza?
Kunalokho kakhulu izinambuzane yasendlini: izimbungulu, amaphela, izicabucabu, izintuthwane. NeKwakha zokuvimbela izindlela
Hlwanyela-somkhaya zibe bomvana noma zibe ezinwabuzelayo somkhaya: incazelo, izithombe, izindlela ukulwa